ၾကားသိရသမွ် Archives - The Moon MM
August 3, 2020 by Wai Lu
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝါတွင်းကာလများတွင် မင်္ဂလာဆောင်လေ့ မရှိကြပါ။ မင်္ဂလာဆောင်လေ့ မရှိကြသည့်အပြင် ခိုးရာလိုက်ခြင်း၊ နှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းများပင် ပြုလုပ်ထားလေ့ မရှိကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ဝါတွင်းကာလတွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားယူကြပြီဆိုလျှင် ထိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူများကို ရစရာမရှိအောင် ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောတတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝါတွင်းကာလတွင် အဘယ့်ကြောင့် မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်းပါသနည်း။ ဤအမေးမှာ လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော မေးခွန်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်သည်ပင် ဤမေးခွန်း၏အဖြေကို သိချင်နေခဲ့သည်မှာ ကြာပေပြီ။ စာအုပ်စာပေများ အမြဲလိုလို ဖတ်ဖြစ်သော်လည်း ခိုင်လုံတိကျသော အကြောင်းပြချက်များကိုကား စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ မတွေ့ရှိခဲ့ရပေ။ အွန်လိုင်းသုံးသည့်အခါများတွင်လည်း မိမိထံသို့ ဤမေးခွန်းကို ခဏခဏ လာလာမေးလေ့ရှိကြသည်။ ဂဃနဏ မသိသောကြောင့် ကောင်းကောင်း ဖြေမပေးနိုင်ခဲ့ပေ။ ယခုအခါမှာတော့ မိမိ၏စိတ် ကျေနပ်ရသည်အထိ အဖြေကို သိခဲ့ရပေပြီ။ ယနေ့မနက် ကိုးနာရီမှ ဆယ်နာရီအတန်းချိန်တွင် … Read more
ဇွဲကပင်တောင်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ယောက်ျားလေးတစ်ဦးပျောက်ဆုံး
July 10, 2020 by Wai Lu
10.07.2020 ( သောကြာနေ့ ) နံနက် ( ၇ ) နာရီခန့်က ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်သို့တက်သွားပြီး ယခုအချိန်ထိ ပြန်မဆင်းလာသေးပဲ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရသည်။ကျားကလေးရွာကလို့သိရပြီး ဆိုင်ကယ် လွယ်အိတ် သော့ ဖုန်းနှင့် ဖုန်း password များ ချန်ထားခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။အဖွဲ့စုံကယ်ဆယ်ရေးသမားများလည်း ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ credit-zinmoe ဇြဲကပင္ေတာင္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးေပ်ာက္ဆုံး 10.07.2020 ( ေသာၾကာေန႔ ) နံနက္ ( ၇ ) နာရီခန႔္က ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚသို႔တက္သြားၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျပန္မဆင္းလာေသးပဲ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္းသိရသည္။က်ားကေလး႐ြာကလို႔သိရၿပီး ဆိုင္ကယ္ လြယ္အိတ္ ေသာ့ ဖုန္းႏွင့္ ဖုန္း password မ်ား ခ်န္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိရတယ္။အဖြဲ႕စုံကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားလည္း ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။
June 11, 2020 by Wai Lu
ဒီနေ့ တပည့်တွေကိုမုန့်ဖိုး တယောက် ၁၀ သိန်းပေးလိုက်ပါပီ.အားလုံးအတွက် စုစုပေါင်း သိန်း ၃၀၀ ဝန်းကျင်ပါ…ကိုယ်လည်းအဆင်ပြေလို့ ချမ်းသာလို့တော့မဟုက်ပါဘူး.ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက်တော့ လိုအပ်တာတွေအတွက်ထောက်ပန့်မူ့တခု ဖြစ်ကြပါစေ..ဘာပဲပြောပြော ဒီလိုပေးရတဲ့ဘဝကို ကျေနပ်ပါတယ် ယူသောလက်မဖြစ်ချင် ပေးသောလက်ပဲ ဖြစ်ပါရစေပေါ့.လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်က ကိုယ်ကတလမှ ၁၂၀၀၀၀ ပဲရခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတယောက် ကနေ ဒီလိုနေရာလေးတခုဖြစ်လာဖို့တပည့်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ရဲဖော်ရဲဘက်တွေပါပဲ.. ဝန်ထမ်းဘဝနေ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းဘဝရဲ့အခက်ကိုလဲသိတယ် လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလဲ သိပါတယ်.ဒီနှစ်ခုကြားဘဝထဲမှာ အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲကြိုးစားနေတယ် နောင်နှစ်တွေမှာလဲအမြဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေပါတယ်.. ဘယ်အရာမှတော့ ကြိုပြောလို့မရတဲ့အတွက် မဆုက်မနစ်သော ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယ ကြိုးစားကြပါစို့.. အားလုံးပျော်ရွှင်ပါကြပါစေ တပည့်တို့…ဝန်ထမ်း ၃၀ ကျော်ရဲ့နောက်ကမှီခိုနေတဲ့ မိသားစု ၃၀ ကျော်လည်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေ.. Credit:Ko Latt Zawgyi ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘဝကိုစာနာၿပီး ဝန္ထမ္း(၃၀)ေက်ာ္အတြက္တစ္ေယာက္ (၁၀)သိန္းက်ပ္စီ … Read more
Covid-19ရောဂါကင်းစင်ပြီး ဝေဘာဂီဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ မေ့ဆေးအထူးကုဆရာဝန်မကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်
May 25, 2020 by Wai Lu
ဆရာဝန်မကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ဟာ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါကို ရှေ့တန်းက ကာကွယ်တားဆီးရင်း အဆိုပါရောဂါရဲ့ ကူးဆက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မေ့ဆေးအထူးကု ဆရာဝန်မကြီးဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါပျောက်ကင်းပြီဖြစ်တာကြောင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာဆေးမှဆင်းခွင့်ရလိုက်ပြီလိုသိရပါတယ်။ Source:Zin Moe Zawgyi Covid-19ေရာဂါကင္းစင္ၿပီး ေဝဘာဂီေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရခဲ့တဲ့ ေမ့ေဆးအထူးကုဆရာဝန္မႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ ဆရာဝန္မႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ဟာ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါကို ေရွ႕တန္းက ကာကြယ္တားဆီးရင္း အဆိုပါေရာဂါရဲ႕ ကူးဆက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဝဘာဂီေဆး႐ုံမွာေဆးကုသမႈခံယူေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ေမ့ေဆးအထူးကု ဆရာဝန္မႀကီးေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ဟာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဝဘာဂီေဆး႐ုံမွာေဆးမွဆင္းခြင့္ရလိုက္ၿပီလိုသိရပါတယ္။
မြန်မာငွေသိန်း ၉၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံး တိုက်ကြက်အသုဘ
May 16, 2020 by Wai Lu
ကြက်အမည် ,,ကျောက်မနီဒေယ်ဘတ်၂၂သန်းကြေး ဖလားလုပွဲမှာ အနိုင်ရရှိလို့ဒီကြက်ရဲ့တန်ဖိုးက အော်တို ဘတ်၂၂သန်းတန်ဖိုးရရှိသွားပါတယ်(ထိုင်းမှာ တိုက်ကြက်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်နည်းက နိုင်ကြေးအပေါ်မူတည်ပီး တန်ဖိုးသတ်မှတ်ယူကြတာပါ။နောက် မနီဒယ်သည်ထိုင်းကြက်မျိုးစစ်စစ်မဟုတ်ပါမြန်မာတိုက်ကြက်နဲ့စပ်ဖောက်ထားတာပါ။ကြက်တစ်ကောင်ကိုခွပ်ရင် ၃ချီမကျော်ဘူး။ထိုငးဘတ်ငွေ ၂၂သန်း နဲ့ဝယ်ရင် မြန်မာလူမျိုးတွေအမြင်မှာတော့ အရူးတွေပဲလို့ထက်မြင်နေကျမှာကျိန်းသေကျမှာပါ။ဒါပေမဲ့ မယုံမရှိကျနဲ့ဒီတိုက်ကြက်က သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဘတ်၂၂သန်းကို ၁နှစ်၂နှစ်လောက်နဲ့အရင်းပြန်ကြေအာင် ရှာပေးတဲ့အစွမ်းအစရှိပါတယ်။ တကယ်လဲ သူသခင်ကိုရှာဖွေခဲ့တာပါဒီကြက်ကို ကြက်မ မျိုးကောင်းတွေအများကြီးနဲ့နဲ့ သားဖောက်ရောင်းတာကြက်ဥတစ်လုံးကို ဘတ်၂၅ဝဝရောင်းပါတယ်။သားပေါက် အဖိုအမနှစ်ကောင်ကို ဘတ်၃သောင်းအကယ်၍ ကြက်ဥလဲမယူချင်ဘူး သားပေါက်လဲ့မယူချင်ဘူး ကိုယ်ဆီက ကြက်မနဲ့ မျိုးထိုးခကြက်မတစ်ကောင် ဘတ်၂သောင်းပေးရပါတယ်။ကြက်မအကောင်၅ဝဝလောက်နဲ့သေသေချာချာ မျိုးဆက်ပြီး ကြက်ဥထုတ်ရောင်းနေတာတောင် ကြက်မဖျင်ကထွက်တာနဲ့ ဘတ်2500ပေးပြီးဝယ်ယူမဲ့လူကအဆင်သင့်ရှိတယ်။မိမိလိုချင်တိုင်းချက်ချင်းဝယ်လို့မရနိုင်ပါဘူးကြိုတင်စာရင်းသွင်းပီးတော့ မိမိအလှည့်ကျအောင်စောင့်နေရမှာပါ။ မနီဒယ်ရဲ့ သားဖောက်အဖို အမမှန်သမျှ အကုန်မွေးနေ့မွေးရကနေ့နံ အတိအကျပါရှိမှာပါလက်ရှိ မနီဒယ်ရဲ့ သားဖောက်တွေထဲကနေမှ ဘတ်၁ဝသန်းဘတ်၅သန်းတန်ကြေး အဆင့်နာမည်ကြီးတိုက်ကြက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုက်ကြက်လောကမှာတော့ မနီဒယ်ရဲ့ သားဆိုရင်အလိုလိုနေရင်းတန်ကြေးမြင့်နေပါတယ်။မနီဒယ်သည် မသေဆုံးခင်အထိသူသခင်အားဘတ်ငွေ ၂၂သန်းမကသူသခင်ကိုရှာဖွေပေးပြီး သူမိန်းမတွေသူသားတွေ သမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေအများကြီးထားခဲ့ပြီးမှ သူသေသွားတာပါဒါကြောင့်မနီဒယ်အားသုဘ လူအသုဘလိုပြုလုပ်ပေးတာပါ။မြန်မာတိုက်ကြက်မျိုးကောင်းလျှင်ပြိုင်ဘက်တိုက်ကြက်ရဲ့ … Read more
တယ်လီဖုန်းကတဆင့်လျှပ်စစ်စီးရာမှ စပါးလှန်းနေသောအမျိုးသားတစ်ဦး မိုးကြိုးထိမှန်သေဆုံး
May 14, 2020 by Wai Lu
စပါးလှန်းနေသော အမျိုးသား တစ်ဦး မိုးကြိုးထိမှန်ပြီး သေဆုံး သွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တခု တောင်ငူခရိုင် ၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ် မှာမေ ၁၃ ည (၄) နာရီ ဝန်းကျင်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အုတ်တွင်းမြို့နယ် ၊ ကြက်တက်ညောင်ပင် တောင်ဘက် အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင် ၁၄၃ /၆ တွင် စပါးလှမ်းနေရာမှ မိုးကြိုးထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ သေဆုံးသူသည် အုတ်တွင်းမြို့နယ် ၊ ကြက်တက်ညောင်ပင်ကျေးရွာနေ ကိုဝင်းကြိုင် ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် လျှပ်စစ်စီးရာမှ သေဆုံးခဲ့သည်ဟု အခင်းဖြစ် အနီးဝန်းကျင် ဒေသခံများကသုံးသပ် ထားကြကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အုတ်တွင်းမြို့ မ ရဲစခန်းတွင်သေမှုသေခင်ဖွင့်ဆိုကာ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် သေဆုံးခြင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရသည်။ Credit:Zin Moe … Read more
အိမ်ကြက်ကို တနေ့တကောင်မရမကလာဝယ်နေလို့ နေတိုင်းရောင်းပေးနေရင်းမှစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ ထိတ်လန့်ဖွယ့်ဖြစ်ရပ်
May 12, 2020 by Wai Lu
ဖြစ်စဉ်မှာ…..ပဲခူးမြို့ မဟာစေတီဘုရားအနား ငါးရပ်ကွပ်ထဲရှိ ကုန်းပေါ်ဈေးထဲတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကြက်သားရောင်းသူမှာ..မတင်ဝင်း..အမည်ရှိဈေးသည်တစ်ဦးဖြစ်သည်…ဈေးဝယ်သူသည် မတ်လ ၁၁ရက်နေ့မှစ၍ ကုန်းပေါ်ဈေးသို့လာရောက်ခဲ့ပေသည် သူရောက်ရှိခဲ့သောအသားရောင်းသည့်ဈေးတမ်း၌…ကြက်သားသည်များရှိပါသော်လည်း.အိမ်ကြက်ရောင်းသည့်ဆိုင်ကိုရှာမတွေ့ပေ…ထိုစဉ်ကြက်သည်မတင်ဝင်းသည်. ..သူ၏ဈေးဗန်းထဲ၌ ထို့နေ့တွင်ရှားရှားပါးပါး ပါလာခဲ့ခင်မျိုးဖြစ်သည်…သူသည်ထိုနေ့ဈေးရောင်းမကောင်းသည့်ရက်လဲဖြစ်သည် အလျောက်အနဲငယ်လည်းမှိုင်တွေနေခဲ့ပေသည်. ထိုစဉ်ဈေးဝယ်သူက သူ့ဆိုင်ရှေ့သို့ရပ်၍ အမဆိုင်အိမ်ကြက်သားရှိလားဟုမေးလိုက်ရာ ဝယ်သူ၏မျက်နှာတောင်မကြည့်အားပဲရှိတယ် ရှိတယ်ဟု….ကဗျာကရာပြောရွေ့သူ့၏ကြက်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည် ထိုနောက်မှဝယ်သူ၏မျက်နှာကို မော့ကြည့်လိုက်ရာ အသက်၄၀. ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်နေသည် ထိုအမျိုးသမီး မျက်နှာသည်လဲ အနဲငယ်ဖျော့တော့နေသည်ကို မတင်ဝင်းသတိထားမိလိုက်သည် သို့သော်ကြက်ရောင်းဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်၍အမဘယ်လောက်သားလဲဟု ပျော်ရွှင်သော်အသံသဲ့သဲ့ဖြင့်မေးလိုက်သည် ဈေးဝယ်သူက ဘယ်လောက်ဖိုးရှိလဲဟုမေးရာတကောင်လုံးယူ၇၀၀၀ထောင်သာပေးရန်ပြောသောအခါ ဈေးမစစ်ပဲဝယ်ယူခဲ့သည် နောက်နေ့များမှာလည်းတကောင်တကောင်ချန်ထားဖို့ပြော၍ဈေးကို ၂ဆပိုပေး၍ဝယ်မည်ဟု ပြောသွားခဲ့သောကြောင့် မတင်ဝင်းပျော်ရွှင်စွာုဖစ်နောက့်နေများ အိမ်ကြက်မရမကရှာ၍ဈေးဝယ်သူအလာကိုမျော်နေခဲသည် ဈေးဝယ်သူလဲ နေ့တိုင်းလာဝယ်၍ကတိတိုင်းဈေးကို၂ဆပေး ဝယ်ယူခဲ့သည် ထိုနေ့များသည် ဈေးဝယ်သူရော ရောင်းသူ မတင်ဝင်းပါ ပျော်ရွှင်ခဲ့သောနေ့ရက်များဖြစ်ခဲ့ပေသည် တနေ့တွင် မတင်ဝင်း စိတ်ညစ်စရာတခုကြုံခဲ့သည် အကြောင်းမှာအိမ်ကြက်ရှာ၍မရသောကြောင့်ဖြစ်သည် ထိုနေ့တွင်ဈေးဝယ်သူရောက်လာခဲ့သော်လည်းရောင်းစရာကြက်မရှိသည့်တွက်ဈေးဝယ်သူအလွန်မင်းစိတ်ဆိုးသွားသည် မတင်ဝင်းလဲမတန်မရာကြက်ကို၂ဆပေးဝယ်သော ဖောက်သည်လွဆ်မည်ဆိုးသောကြောင့် နောက်နေ့ကြက်မရရအောင်ရှာပေးမည်ဟု ကတိပေးချော့၍ပြန်လွှတ်ခဲ့သည် နောက်နေ့သိုရောက်သော အခါဈေးဝယ်သူရောက်လာရာကြက်ကိုရောင်းပေးလိုက်မှ … Read more
ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီကျော်အချိန်က မန္တလေးမြို့တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွား
May 11, 2020 by Wai Lu
မန္တလေးမြို့တွင် ယနေ့(၁၁-၅-၂၀၂၀) မွန်းလွဲ ၂ နာရီကျော်အချိန်က မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။ Credit:TheMandalayNewsJournal Zawgyi ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းၿပီး ေလျပင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြား မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔(၁၁-၅-၂၀၂၀) မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းၿပီး ေလျပင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။
ထားဝယ်မြို့ ဆန်းချီမူလွန်ကျောင်းရှိ Q စခန်းဝင်နေသူများအား စိတ်အမောပြေစေဖို့ သဘင်အစည်းအရုံးမှ ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြ
ထားဝယ်မြို့လည်းမခေဘူးဗျ ဆန်းချီရပ် မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိ Q များအား သဘင်အစည်းအရုံးမှ စိတ်အမောဖြေ တကယ်ခပ်ခွာခွာလေးကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါသည် ။ ၁၀.၅. ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ညထားဝယ် ၊ ဆန်းချီမူလွန်ကျောင်း Q စခန်းတွင် ပြင်ပမှကြည့်ရှု့မရနိူင်အောင် တာဝန်ခံများမှကြိုတင်စီမံထားရှိပါသည်။ Credit:Zin Moe Zawgyi ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ဆန္းခ်ီမူလြန္ေက်ာင္းရွိ Q စခန္းဝင္ေနသူမ်ားအား စိတ္အေမာေျပေစဖို႔ သဘင္အစည္းအ႐ုံးမွ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾက ထားဝယ္ၿမိဳ႕လည္းမေခဘူးဗ် ဆန္းခ်ီရပ္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ Q မ်ားအား သဘင္အစည္းအ႐ုံးမွ စိတ္အေမာေျဖ တကယ္ခပ္ခြာခြာေလးကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါသည္ ။ ၁၀.၅. ၂၀၂၀ ရက္ေန႔ ညထားဝယ္ ၊ ဆန္းခ်ီမူလြန္ေက်ာင္း Q စခန္းတြင္ ျပင္ပမွၾကည့္ရႈ႕မရႏိူင္ေအာင္ တာဝန္ခံမ်ားမွႀကိဳတင္စီမံထားရွိပါသည္။
မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ကာ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့် ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦးလဲကျသေဆုံး
May 8, 2020 by Wai Lu
ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရင်း လဲကျသေဆုံးခဲ့တဲ့အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားငယ် နှစ်ဦးဟာHenan Province ပြည်နယ်နဲ့ Hunan ပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ် ကာလသုံးလတာ ပြည်နယ်တွေပိတ် အလုပ်တွေရပ်ဆိုင်းကျောင်းပိတ် လော့ ဒါင်းလုပ်ခဲ့ပြီး မေလမှာ ကျောင်းတွေပြန်တက်ဘို့ ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယာ။ကျောင်းသားတွေကို မျက်နှာဖုံးတွေစာသင်ခန်းတွေမှာဆိုရှယ် စည်းခြား အကာအရံတွေနဲ့ ကျောင်းပြန်တက်ခဲ့ကြတာပါ။ ကျောင်းသားငယ်တွေဟာ မျက်နှာဖုံးတွေတချိန်လုံးတတ်ထားရတာကြောင့် လေရူရတာခက်ခဲပြီးလိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏဟာနည်းလာနေတာကို စာသင်ချိန်မှာမသိသာပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါဆိုရင် အမောဆို့တာလေရူရတာခက်ခဲပြီး သေဆုံးရတဲ့အထိ အန္တရယ်ရှိပါတယ်။လူ-သတ္တဝါ -သစ်ပင်သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးလေထဲမှာပါလာတဲ့ အောက်ဆီဂျင် (O2) နဲ့ ရှင်သန်နေကြတာပါ။အသက်ရူရာကနေ အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ဟာအဆုတ်တွင်းရောက်ပြီး သွေးနီဥတွေကို အရောင်တင်ပေးသလိုကိုယ်တွင်းစွမ်းအားတွေ သွေးလည်ပါတ်မှုတွေကောင်းလာပါတယ်။ ခုလိုနေ့အပူချိန် မြင့်တက်လာနေတဲ့ ကာလမျိုးမှာ မျက်နှာဖုံးကိုလိုတာထက် တချိန်လုံးဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးဖုံးဟာ ပိုးကာတာထလေရူသွင်းထုတ်တဲ့ အခါမှာအခက်ခဲတွေရှိပြီးကျန်းမာရေး ရုတ်တရက်ထိခိုက်လာစေပါတယ်။ Credit: Social … Read more